Madheshvani : The voice of Madhesh - आन्दोलन नै एक मात्र विकल्प हो : लक्ष्मण थारू
संयोजक, थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा
० टीकापुर घटनाको चार वर्ष पछि ‘टीकापुर सम्मेलन’ गर्नुको उद्देश्य के थियो ?
— यो सम्मेलनले दुई वटा उद्देश्य राखेको थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको टीकापुर र सुदूरपश्चिममा बिग्रिदै गएको सम्बन्ध, सद्भाव र त्रासलार्ई भावनात्मक रूपमा एकतामा परिणत गर्नु हो । यो घटनापछि कसैले पनि सोचेका थिएन कि थारूहरू पुनः एकजुट हुन सक्छन्, आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न सक्छन् । तर हामीले हिम्मतका साथ कार्यक्रम गरेर त्यहाँको आतंक चिर्न सफल भएका छौ । दोस्रो उद्देश्य भनेको विगत देखिका राजनीतिक एजेन्डा तथा मुद्दाहरू संविधानमा समेटिएका छैनन् । यसरी नसमेटिएपछि यो संविधानका कतिपय धारा, उपधारा र अनुसुचीहरू हामी मान्न तयार छैनौँ । रेशम चौधरीलगायतका अन्य साथीहरूमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरू खारेजी, टीकापुर घटनालाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने, विगतमा राज्यसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका मुद्दाहरू जनतालाई बुझाउन र सरकारलाई घच्घचाउन चाहन्थ्यौ, यसमा पनि हामी सफल भयौ ।
० बिग्रिएको सामाजिक सद्भावमा सम्मेलनले के कस्तो प्रभाव पा¥यो त ?
— टीकापुर सम्मेलन गर्ने तयारी गर्दैगर्दा यहाँका व्यापारी, प्रशासन, मजदुर, कर्मचारी तथा सबै जनता चार वर्ष पहिले जस्तै घटना फेरि हुने हो कि भनेर आतंकित थिए । तर सबैलाई बुझाएर, चार वर्ष पहिलाको घटना पनि हामीले गराएको होइन, राज्यले दोषी पत्ता लगाउन पर्छ र यो कार्यक्रम हामी अत्यन्तै सद्भावपूर्ण, संविधानको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्त तरिकाले सफल बनाउने बचन दिएर कार्यक्रम सुरू गरेका थियौ । सम्मेलनले त्रास, समुदाय—समुदायबीचको व्यवहार सबैमा धेरै हदसम्म सुधार आएको छ ।
० भनेपछि, घटनापश्चात प्रभावित रहेको टीकापुरमा समुदाय—समुदायबीचको दूरी समाप्त भयो त ?
— हो, हिजो थारू समुदायका अगुवाहरू तथा आमनागरिक आफ्नो अधिकार र न्यायका लागि बोल्न सक्दैनथे । बोल्न तथा आवाज उठाउनका लागि डराउँथे भने आज आमनागरिक आफ्नो अधिकार र न्यायका लागि सहज रूपमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छन् । यो पनि हाम्रो उपलब्धि हो ।
० विगतमा पनि आन्दोलनकै कारण टीकापुर घटना भयो, तपाईहरू पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । अबको आन्दोलन कस्तो हुनेछ ?
— चार वर्ष पहिलाको हामीले कुनै घटना गराउने उद्देश्यका साथ वा कुनै अपराध गर्नका लागि आन्दोलन गरेका थिएनौं । संविधान बन्दै गर्दा आफ्ना जायज एजेण्डाहरू, आफ्नो समुदायको पहिचान तथा अधिकार संविधानमा नछुटोस् भन्नका निमित्त गरिएको आन्दोलन थियो । यसले गर्दा हिजो पनि हाम्रो कुनै हिंसात्मक घटना निम्ताउने लक्ष्य थिएन र आज पनि हामी जुन आन्दोलनका तयारीमा रहेका छौ, यसमा पनि हाम्रो कुनै हिंसात्मक तथा गैरसंवैधानिक कार्य गर्ने हाम्रो नियत रहेको छैन । हामी हाम्रा एजेण्डाहरू शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडी राखेका छौँ । राज्यले सुनोस् र समयमै सचेत बनोस् । यद्यपी हामीले तीन चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषण गरेका छौँ । सहज र शान्तिपूर्ण रूपले हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।
० टीकापुर सम्मेलनमा डा. बाबुराम भट्टराईले ‘तपाईहरूको आन्दोलनमा हाम्रो पनि साथ छ’ भन्ने भनाइप्रति नेकपाका नेता भीम रावलले मुलुकमा पुनः विखण्डन निम्त्याउनका लागि यस्तो अभिवृति दिएको टिप्पणी गर्नुभयो नि ?
— यसमा सत्ता पक्षीय शासकहरूको नियत खराब र जातिवादी रहेको छ । उनीहरू थारूलाई हेप्न, दमन गर्न, दास, नोकर तथा पार्टीमा झोले पार्टी कार्यकर्ता बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले हामी हाम्रो अधिकार र न्यायको लागि लड्छौ तर यसमा कसैले विखण्डनको आरोप लगाउँछ भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, हाम्रो यस्तो नियत रहेको छैन । थारूहरू देशको सबैभन्दा राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रति सचेत, श्रमजीवी र मिहनेति शक्ति हो । सत्तापक्षको यस्तै यस्तै रवैयाले राष्ट्र आज धेरै कठिन अवस्थामा रहेको छ ।
० तपाइँहरूको आन्दोलनले विखण्डनकारीको संज्ञा दिइँदै छ, जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ नि ?
— हामी विखण्डनवादी जाति होइनौं । हाम्रो यो आन्दोलन राष्ट्रवादी, शान्तिपूर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति, देशको पहिचानलाई संरक्षण गर्ने, देशमा शान्ति र सद्भावना जगाउने आन्दोलन हो । हाम्रो मान्यता भनेको शासकहरू निरंकुश हुन मिल्दैन, शासकहरूको दमनलाई हामी घोर विरोध गर्दछौं । भीम रावल जस्ता कतिपय व्यक्तिहरू जातीवादी छन् जो विखण्डन, आतंक तथा हिंसा चाहन्छन् । त्यसैले हाम्रो नकारात्मक प्रचार गरिरहेका छन् ।
० तपाईहरूको आन्दोलन टीकापुरमा मात्र हुने हो कि देशभर गर्ने योजना छ ?
— हामी टीकापुर मात्रै नभएर सम्पूर्ण तराई÷मधेशका जिल्लाहरू र काठमाडौंसहितका ठाउँहरूमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हुन्छ । खासगरी, कैलाली, कञ्चनपुरदेखि लिएर बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, झापालगायत काठमाडौँमा पनि विरोधका कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ । सुरूवातको रूपमा असोज ३ गते संविधान दिवस हामी कालो दिनको रूपमा मनाउने छौं ।
० आन्दोलनका मुख्य—मुख्य एजेन्डाहरू के के हुन् ?
— हाम्रा एजेण्डा भनेको सांसद रेशम चौधरी लगायतका साथीहरू माथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरू खारेजी, रिहाई, टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायत छन् । हामी सात वटा मात्र प्रदेश मान्न तयार छैनौ । अझै एक थपेर आठ ओटा बनाउनु पर्दछ । लाल आयोग प्रतिवेदन बाहिर आउनु पर्दछ । हामीले राज्यसँग गरेका पाँच, छ र दश बुँदे सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्दछ । साथै टीकापुर सम्मेलनको १५ बुँदे घोषणापत्र अनुसार २०७२ साल भदौ ८ गते थारूहरूको घरमा तथा एफ.एममा आगो लगाउने र चोरी लुटपाट गर्नेहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा लिएर सजाय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रा प्रमुख एजेण्डाहरू हुन् ।
० अदालतबाट नै दोषी ठहरिएर सजाय तोकिएका सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको लागि आन्दोलन कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
— जिल्ला अदालतको फैसला चितवनमा बुझेर दिपायलको उच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरिएको छ । आशा छ अब जिल्ला अदालतभन्दा माथिको अदालतले हामीलाई अन्याय गर्ने छैन । साथै राज्यका प्रमुख निकाय लगायत सत्तामा बसेका मुख्य नेताहरूले यसलाई थारूहरूको मात्र एजेण्डा नबुझि टीकापुर घटनालाई शान्ति र सद्भावना कायम गर्ने गरी राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यसका लागि हामी पहिलो चरणमा प्रचारात्मक, दोस्रो चरणमा दबाबमूलक कार्यक्रम र अन्तिम तथा तेस्रो चरणमा निर्णायक आन्दोलनको रूप लिएर हामी अगाडी बढ्नेछौ ।
० तीन चरणको कार्यक्रमबाट पनि सरकारले तपाइँहरूको माग सम्बोधन भएन भने के गर्ने ?
— हाम्रो दुई चरणको दबाबमूलक कार्यक्रमबाट नै राज्यले हाम्रा जायज एजेण्डालाई सुन्नुपर्दछ । हाम्रो मागप्रति राज्यले चासो दिनुपर्दछ र सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यदि दोस्रो चरण सकिँदा पनि राज्यले वेवास्ता ग¥यो भने तेस्रो चरणको कार्यक्रम सशक्त रूपमा बन्द हडतालसहितको हुनेछ ।
० तपाईहरूले प्रधानमन्त्रीलगायत कतिपय मन्त्रीहरूलाई समेत थरूहट तराई क्षेत्रमा कालो झण्डा देखाउन तथा निषेध गर्नुको कारण र उद्देश्य के हो ?
— हामीहरूलाई चित्त नबुझेका कुरा गर्ने मन्त्री, सांसद तथा हाम्रो विरूद्धमा कानुन नियमहरू बनाउने, जसले हामीलाई दमन गर्न खोज्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने त कुरै हुँदैन । तेस्रो चरणको कार्यक्रममा हामी यसलाई पनि सहज र शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडी बढाउँछौ ।
० तपाई आबद्ध रहेको राजनीतिक दल राजपाको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
— अबको आन्दोलन थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले अवलम्वन गरेको आन्दोलन हो । यो कुनै राजनीतिक अभियान, जनपरिचालन, प्रचारात्मक तथा कुनै पनि दल विशेषको कार्यक्रम होइन । यसमा हामीले कुनै दलमा कसैलाई समावेश गर्ने र कुनै राजनीतिक एजेण्डाको विषयमा बोल्न लगाउने गरी सुचारू गरिएको छैन । यो कार्यक्रम निष्पक्ष रूपमा थारू आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरूलाई समेट्ने गरी अगाडी बढाइरहेका छौँ । यसमा कतिपय दलको समर्थन रहेको छ । तर यो कुनै दल विशेषको कार्यक्रम होइन ।
० तपाई टीकापुर घटनाको दोषीको रूपमा सजाय भोग्नुभयो, सो घटनालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
— चारवर्ष अगाडि टीकापुर घटना जसरी भयो, त्यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण र असाध्यै दुःखद घटना थियो । यसमा हामी आश्र्चयचकित छौ । यति ठूलो दुर्घटना कसले गरायो, राज्यले आजसम्म पनि दोषी पत्ता लगाएको छैन । तर एकाएक थारूहरूलाई कुनै आतंककारीको रूपमा, मान्छे मार्ने ग्याङको रूपमा राज्यले जसरी परिभाषित र प्रचार गरेको छ, यो एकदमै गलत रहेको छ । यसमा हामी निर्दाेष छौं । यसमा हाम्रो संलग्नता रहेको छैन हामी मान्छे मारेका छैनौँ । हामीजस्ता निर्दाेष मान्छेलाई राज्यले फसाउने कार्य गरिरहेको छ । त्यसैले आम नेपाली जनता सचेत हुनु जरूरी छ ।
० तपाईहरू बारम्बार यसको दोष राज्यलाई दिनुहुन्छ, यसमा राज्यको संलग्नता कसरी देख्नुहुन्छ ?
— राज्य आफैमा पूर्ण संलग्न रहेको छैन । टीकापुर जस्तो ठाउँमा शान्तिपूर्ण ¥याली, आवाज, माग र आन्दोलनलार्ई सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यहाँको संयमता बुझनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गरेन । यसमा थुप्रै कुराहरू अनुसन्धान गर्नुपर्ने छन् । राज्यले पत्ता लगाउनुपर्ने थियो अपराधी । तर राज्यले यसलाई अत्यन्तै सहजरूपमा लिएर एकहोरो थारू समुदायलाई अपराधीको परिचय प्रदान गर्न खोजिरहेको छ । यो नै गलत रहेको छ ।
० तपाईहरूको यो घोषित आन्दोलनको सन्देशको विषयमा आम जनतालाई के भन्नु हुन्छ ?
— टीकापुर सम्मेलनबाट जे जस्ता राजनीतिक, प्रचारात्मक तथा संगठनात्मक दबाबमूलक सशक्त कार्यक्रमहरू घोषणा भएका छन्, यसमा आम थारू, मुस्लिम, मधेशी, आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर एक पटक यो देशको निरङ्कुशताको विरूद्ध, न्याय र अधिकारको लागि संगठित रूपमा अगाडी बढौँ भन्न चाहन्छु ।